Maqaallada Senraj Soundar ee Martech Zone |
Maqaallada by Senraj Soundar
Ka dib markii Watson uu noqday horyaalkii halista, IBM wuxuu la shaqeeyay Cleveland Clinic si uu uga caawiyo dhakhaatiirta inay dardar geliyaan oo ay u hagaajiyaan heerka saxda ah ee cudurka iyo dawooyinka ay qoreen. Xaaladdan oo kale, Watson wuxuu kordhiyaa xirfadaha dhakhaatiirta. Marka, haddii kumbuyuutar uu gacan ka geysan karo fulinta howlaha caafimaadka, hubaal waxay umuuqataa in qofku caawin karo oo uu horumarin karo xirfadaha iibiyaha sidoo kale. Laakiin, kumbuyuutarka waligiis ma beddeli doonaa shaqaalaha iibka? Macalimiinta, wadayaasha, wakiilada safarka, iyo